Maqal: Wasaarada Warfaafinta Puntland oo ka hadashay idaacado ku yaalay Puntland oo ay albaabada u laabtay – SBC
Maqal: Wasaarada Warfaafinta Puntland oo ka hadashay idaacado ku yaalay Puntland oo ay albaabada u laabtay
Posted by Webmaster on April 3, 2013 Comments
War Qoraal ah oo ka soo baxay wasaarada Warfaafinta ee Puntland ayaa manta lagu joojiyay inay Ka shaqeeyaan Deegaanadan Sadexda Idaacadood ee kala Ah Daljir, One nation iyo Codka Nabada.
Wasiirka Warfaafinta Puntland Maxamud Caydiid Dirir oo Wareysi Gaar ah Siiyay Warbaahinta SBC International ayuu ku xaqiijiyay in dowlada ay soo saartay qoraal shaqada looga joojinayo Hayadahan warbaahineed ka dib markii ay ka dhago adeygeen amaro horey dowlada u soo saaraty oo ku saabsanaa joojinta idaacado meelo ka baxsan Puntland ku yaala oo ay siidaayaan .
Mar wasirka wax laga weydiiyay sabata ay uga soo horjeesteen Idaacadaha la sidaayo sida Radio Irin, Radio Ergo iyo Radio Bar-kulan ayuu ku sheegay in idaacadahan ay yihiin kuwo siidaayaan Wax aan dan u ahayn Deegaanada Puntland.
Eng Max’uud Caydiid waxaa uu sheegay in Wasaarada warfaafinta ay diyaar u tahay Fulinta wax kasta oo wadahadal ah oo arinkan laga geli karo isaga oo sheegay in ay rajeynayaan in uu fuli doono Amarka lagu xirayo Idaacadahan.
Xiritaanka Sadexdan Idaacadadood ayaa yimid ka dib markii Wasaarada Warfaafinta ay sheegtay inaan la baahin Karin IDaacadaha kor ku xusan Ilaa amar danbe taasi oo qoraal ahaan looga siidayay Warbaahinada Qaar ee Puntland.
Wasaarada Warfaafinta ayaa Dhinac iska Riixday inay wado Caburin Saxaafadeed ka dib markii ay dhowr jeer ooh ore Puntland u xirtay Hayado Warbaahineed Wariyaal Waxana uu sheegay in Ay Puntland ka jirto Xoriyada hadalka iyo Saxaafada oo xor ah.
Hayadaha Warbaahinta ee manta Shaqada laga Joojiyay Ayaan si rasmi ah Amarka u wada Fulin Idaacada Daljir waxaa ay ku sheegtay Qoraal lagu qoray Boggeeda Internetka in ay joojisay Idaacadihii hore loogu amaray inay Joojiyaan.
Dhageyso WASIIR WARFAAFINTA
Dhanka kalena Idaacada One Nation oo ku taala Boosaaso ayaa Masuuliyiintoodu sheegeen inaysan horey u soo gaarin wax qoraal ah oo lagu amrayo inay Joojiyaan Idaacada Bar-kulan oo ay baahiso Radio One Nation.
Amarka ka soo baxay Wasaarada warfaafinta ayaa si weyn waxaa uu guux uga dhexdhaliyay Bahda Saxaafada ee ka howlgasha Deegaanada Puntland.